Grand Royal Group International (GRGI) - Congratulation Hantharwaddy United F.C. - Grand Royal Group International (GRGI)Congratulation Hantharwaddy United F.C. - Grand Royal Group International (GRGI)
Congratulation Hantharwaddy United F.C.
Grand Royal Group International Co.Ltd’s football club, Hantharwaddy United F.C. has ranked as place No2withatotal 41 points in MPT Myanmar National League 2020 throughout the seasonal competitions. GRGI is proud to congratulate Hantharwaddy United F.C. for this very first time achievement in the history of the club.
“Grand Royal Group International Co.,Ltd ၏ ကိုယ်ပိုင်ဘောလုံးအသင်းဖြစ်သော ဟံသာဝတီယူနိုက်တက်အသင်းသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ MPT Myanmar National League ပြိုင်ပွဲ၊ ကျင်းပပြီးစီးချိန်တွင် စုစုပေါင်း ရမှတ် (၄၁) မှတ်ရရှိခဲ့ပြီး၊ အမှတ်ပေးဇယားတွင် အဆင့်နံပါတ် (၂) ဖြစ် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ အသင်း၏ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ပထမဆုံးကြိမ်အနေဖြင့် အအောင်မြင်ဆုံးကာလကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်းအပေါ် GRGI က အထူးဂုဏ်ယူ၊ ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။